नेपाल आज | डाक्टरलाई कसैले माया गर्दैन (भिडियोसहित)
नेपाल चिकित्सक संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. लोचन कार्की आफ्नो प्रमुख उद्देश्य विरामी र चिकित्सकबीच विश्वासको सम्बन्ध बढाउन चाहेको बताउँछन् । पछिल्लो केही समययता विरामी र चिकित्सकबीच विभिन्न कारणले दूरी बढेकाले त्यसलाई हटाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
डा. कार्की भन्छन् ‘अहिले प्रमुख विषय भनेको विरामी र चिकित्सक दुवैको सुरक्षाको हो । एकातर्फ अस्पताल र चिकित्सकमाथि विरामीको विश्वास घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकमाथि आक्रमण बढिरहेको छ । यसका लागि सेवामा सुधार ल्याउँदै विरामी र चिकित्सकबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ ।’
कुनै समय थियो– जतिबेला डाक्टरलाई भगवानका रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यसबेला डाक्टरहरुले जोखिम मोलेर भएपनि काम गर्थे । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । सानो केही भयो कि अस्पताल र चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन्छ । त्यही भएर चिकित्सकहरु जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । यसले विरामीलाई बढी नोक्शान भएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले नेपालमा डाक्टरलाई कसैले माया गर्दैन । यिनीहरु के गर्न सक्छन् ? यिनीहरुको हैसियत केही छैन भन्ने सोच पलाएको छ । सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्म सबैले हेलाको दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । डाक्टरहरुप्रति आदर र सत्कारको व्यवहार छैन । यो अवस्थामा डाक्टरहरुको मनोबल उच्च पार्न निकै जरुरी छ ।
डा. कार्कीका अनुसार उनको पहलमा विभिन्न रोगको उपचारका लागि न्यूनतम ‘गाइडलाइन’ बनाउने सोच अनुरुप प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । विशेष रोगका लागि विशेष ‘गाइडलाइन’ आवश्यक भएकाले त्यस सम्बन्धी काम तीब्र गतिमा अघि बढेको छ ।
यस्तै, चिकित्सक संघलाई डाक्टरहरुको हक हितमा मात्र काम गर्ने संस्थाको रुपमा नभइ ‘रिसर्च सेन्टर’का रुपमा पनि विकास गर्ने योजना छ । चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, विरामी र चिकित्सक सम्बन्ध तथा स्वास्थ्य चेतनाका लागि स्वास्थ्य सम्बद्ध पत्रकारहरुसंग सहकार्यको काम पनि अघि बढाइने छ ।
नेपालका डाक्टर र अस्पताल सबै प्रकारका रोगको उपचार गर्न सक्षम र योग्य भएपनि केही मानिसहरुले विदेश नै ताक्नु विडम्बनापूर्ण छ । अब सबैलाई नेपालमै उपचार गर्न दबाब र प्रेरणा जगाउने काम पनि गरिनेछ ।
डा. कार्की भन्छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको उपचार हाम्रै देशको अस्पतालमा भइरहेको छ । नेपाली डाक्टरहरुले नै हेरिरहेका छन् । उहाँको मिर्गौला प्रत्यारोपण नेपालमै गर्ने सुनेको छु, त्यो राम्रो हो । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको अवस्था हेर्दा उहाँलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न कुनै समस्या छैन । ’
‘अहिले चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपालमा पनि त्रास फैलाएको छ । नेपाल सरकारले जति सजगता अपनाउनुपर्ने हो, त्यति देखिएन । यस्तो बेला भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउनु छ भनेर चिनियाँ नागरिक वा भनौ कोराना संक्रमण फैलिएका देशका नागरिकलाई भ्रमणका लागि आह्वान गर्न मिल्दैन ।’ कार्की बताउँछन् ।